अस्पतालका ६०० कर्मचारी दुई महिनादेखि तलबविहीन - Baikalpikkhabar
अस्पतालका ६०० कर्मचारी दुई महिनादेखि तलबविहीन
फागुन २७, २०७५ चितवन / भरतपुर सरकारी अस्पतालमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा अस्पताल सञ्चालनमै समस्या भएको छ। बजेट अभावले दुई महिनादेखि ६०० कर्मचारीले तलब पाएको छैनन्। अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौमा आएको ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुसमा सकिएपछि त्यसयता कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। अस्पतालमा विकास समितिअन्तर्गतका ज्यालादारी, स्थायी, करारका गरी ४०० भन्दा बढी कर्मचारी र १७५ जना सरकारी दरवन्दीका कर्मचारी कार्यरत छन्। उनिहरुको तलबमा महिनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पताल प्रदेश सरकार कि संघीय सरकार मातहत रहने भन्ने केही समयअघि देखिएको अन्योलताले गर्दा समस्या भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. कृष्ण पौडेलले बताए। अस्पताल संघीय सरकार मातहत निर्णय भए पनि बजेट नआएको डा. पौडेलले बताए। अस्पताल अहिले विशिष्ट विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति भई संघीय सरकार मातहत रहेको छ। सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार अस्पतालले बिरामी जाँच, ल्याव, एक्सरे, भिडियो एक्सरेलगायतको शुल्क, अस्पताल परिसरमा सञ्चालनमा रहेको तीन वटा फार्मेसीबाट र सटर भाडाबाट आम्दानी गर्दछ। यस्तै, जग्गा भाडामा दिएबापत पुरानो मेडिकलले दिनुपर्ने दुई करोड २१ लाख ४६ हजार ५०३ रुपैयाँ अस्पताललाई दिन आनाकानी गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ।
सोमबार, २७ फागुन, २०७५, बिहानको ०९:४८ बजे